Nagarik News - मिक्स्ड भेज जिन्दगी
होमपेज / नागरिक शनिबार / मिक्स्ड भेज जिन्दगी
मिक्स्ड भेज जिन्दगी	27 Apr 2013 १४ बैशाख, २०७०
किशोर नेपाल	Be the first to comment! 12345 (0 votes)
नयाँवर्ष रे! अविरल तनावमा रहेको यो शहर, मेरो शहर (कि यो अरू कसैको पनि हो?) नयाँवर्षको सुखद उपलक्ष्यमा शुभकामना बाँडिरहेको छ। मोबाइलको रुखो मेसेज टोन निरन्तर बजिरहेको छ, तीनदिन अघिदेखि नै। शहर गगनचुम्बी घरहरूको नयाँउचाइमा पुगे पनि काला कौवाहरूको बथान कराउन छाडेको छैन। मूल शहरको मुख्य मार्गको छेउमा रहेको राजदरबारनजिक ढल्नका लागि आँधी पर्खेर बसेका मक्किएका बूढा रूखको हाँगामा दर्जनौं चमेराहरू झुन्डिएका छन्। जिन्दगीको यात्रा गीतमा मात्र रमाइलो हुन्छ। जिन्दगी आफैं त उस्तै हो– मिक्स्ड भेजिटेवल। आलु पनि छ, मूला र काउली पनि छ, सिमी र कोसा छ। छैन त स्वादमात्रै छैन। ती चमेरा देखेर काला कौवा लगातार कराइरहेछन्, क्याँक्याँ...क्याँक्याँ...! काला कौवाहरूको क्याँक्याँलाई काग बोल्यो भन्दछन् मानिसहरू। तर, वरपर 'शुभ बोल' भनेर कागलाई सम्झाउँदै, पन्युले कसौंडी कोट्याएर सालको पातमा केही सिता भात दिने कुल वधुहरू यतातिर भेटिँदैनन्। शहर अब शहर नभएर पेशा भएको छ। उसै पनि कराउनु त कागको पेशा नै हो। क्याँक्याँकराउनु उसको पेशा हो र पेशा गर्न पाउनु उसको अधिकार। बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको केही पनि बिक्दैन। तर, जति कराए पनि कालो कौवाको आवाज बिकेको छैन।'अक्कुपाई बालुवाटार' अधिकारकर्मीहरूको एउटा समूह महिनौंदेखि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास (कार्यालय होइन) ताकेर कराइरहेको थियो। अहिले त्यो चित्कार बन्द भएको छ। देशका ठूला–साना, रंगीन र काला पत्र–पत्रिकाहरू मानिसका दुर्भाग्यहरूको लामो सूची प्रकाशित गरिरहेका छन् निरन्तर। हरिभक्तको अनुभवमा यी सबै पेशा र अधिकारभित्र संवेदना होइन, प्रपोजलको खेलमात्रै हुन्छ। प्रपोजल अर्थात् नाटक। हरिभक्तले बुझेको छ– नाटकमध्येका कति नाटक नौटंकी सावित हुुन्छन्। कति नाटक गीति नाटकको दुःखान्तमा पुगेर टुंगिन्छन्। जीवनको प्रतिलिपि ठ्याक्कै उतार्ने दावा गर्ने कुशल अभिनेता एक टुक्रा जीवन रंगमन्चमा उतारेर अखबारमा छापिन्छ। र, दंग पर्दछ।नाटक नै हो जिन्दगी– जिन्दगी एक सफर है सुहाना, यहाँकल क्या हो किसने जाना? फुच्चे गाउँदैछ र सिंगमरमरले ढाकेको भर्‍याङ ओलर्िंदैछ। ओलर्िंदै छैन, हाम फाल्दैछ। ऊ हाम फालेको देखेर उसकी हजुरआमा आत्तिन्छे र कराउँछे, लड्लास्! उसलाई थाहा छैन, यसरी नै हाम फाल्छन् सबै सत्यहरू। जिन्दगीको यात्रा गीतमा मात्र रमाइलो हुन्छ– जिन्दगी आफैं त उस्तै हो– मिक्स्ड भेजिटेवल। आलु पनि छ, मूला र काउली पनि छ, सिमी र कोसा छ। केराउ, गाजर, साग सबैको मिसमास। छैन त स्वादमात्रै छैन। नुन स्वाद हो भने नुनिलो छ। स्वाद नुनमात्रै होइन। जीरा–मसलामात्रै पनि ताजा स्वाद होइन। डिब्बामा छापिएको रंगीन तस्बिरलाई पत्याउने हो भने 'स्वादको शहनशाह' मात्रै स्वाद हो। त्यो शहनशाह हिजोआज बफ मःमःमा प्रयोग हुने गरेको छ। त्यसको त बास्ना मन पराउनसमेत चौडा छाती चाहिन्छ।'जिन्दगीमा केही गर्न सकिएन' फुच्चेको बाबु गनगन गर्दथ्यो र गीत गुनगुनाउँथ्यो– जिन्दगी एक सफर है सुहाना...उसले केही गर्न नसके पनि हरिभक्तले सहकारी खोलेर घर गृहस्थीको पांग्रा राम्रै गुडाइरहेको थियो। त्यो पांग्रा बीचैमा पंक्चर भयो। उसलाई फाप्दै फापेन, पटक्कै फापेन यो गणतन्त्र। उसको सहकारीलाई अझ राम्ररी उक्साउन थप लगानी लिएर आएको थियो इन्द्रे। ऊ लगानी लिएर आएकै दिन सुनको भाउ बढेको थियो। त्यही दिन नेपाल गणतन्त्र घोषित भएको थियो। त्यसपछि त इन्द्रे सहकारीको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा बस्यो। हरिभक्तले चाहिँ सडकको छेउमा साइकिलको टायरको पंक्चर टाल्ने पसल खोल्यो। शहरमा मोटर साइकिलको जगजगी भएका बेला साइकिलको टायर किन प्वाल पर्थ्यो र? त्यहाँपनि जिन्दगीले लखेट्न नछाडेपछि अहिले स्टेशनरी पसल खोलेर बसेको छ हरिभक्त– जिन्दगी मिक्स्ड भेजिटेबल भएजस्तै उसको पसल पनि कफी, चिया, पत्र–पत्रिका र कपी, पेन्सिल र कलमको मिक्स्ड भेन्यु भएको छ। हरिभक्तलाई आफनो यो मिक्स्ड भेन्यु चलेकोजस्तो लाग्दैन। ऊ भेन्युकै अगाडि पानीपुरी बेचिरहेको रामचन्दरको ईर्ष्या गर्दछ। कत्ति मजाको व्यापार, घर भाडा तिर्नु पनि नपर्ने। पानी बिजुलीको झन्झट बेहोर्नु पनि नपर्ने। बेला–बेलामा नगरपालिकाका सिपाहीलाई पानीपुरी खुवाए शान्ति, ओम शान्ति!कुनै दिन हरिभक्त फेसबुकमा आफ्नो स्टाटस (हैसियत होइन) अपग्रेड गर्दै थियो– कफी कल्चर, बुलशीट, ननसेन्स। जिन्दगीमा यस्तो दिन पनि देख्नुपर्‍यो। खराब के हो? मेरो ललाट कि कन्चट? पच्चीस सय रुपियाँँतिरेर कट्टा किने पनि ललाट र कन्चट कुन खराब हो? छुट्याएर कट्टा हान्न सकिन। साथमा राख्न पनि डर लाग्यो त्यो कट्टा। कहिलेकाहीँ लाग्छ, मानिसहरू तीन रुपियाँँको चिया पिउँछन् र दश रुपियाँँको अखबार सित्तै पढ्छन्... हरिभक्तसँगै छेउको स्टुलमा टुक्रुक्क बसेको एउटा थाङ्ने ग्राहक बेलुकीको दारुको गन्धसम्म नउडेको गिलासमा कफीको नाममा कलंक चुस्दै अर्ग्यानिक कफीको स्वादको महिमा ओकल्न थालेको थियो। हरिभक्तलाई हाँसो उठ्यो– साला भैमाले (उसले यो शब्द साझा प्रकाशनले छापेको शब्दकोशबाट त्यतिबेला सिकेको थियो, जतिबेला ऊ एउटा निबन्ध प्रतियोगिताका लागि 'दूधमा पानी कसरी मिसाइन्छ?' शीर्षक निबन्धको रचना गर्दै थियो) कफीको पाँच रुपियाँँतिर्ने औकात छैन सय रुपियाँँकपको अर्ग्यानिक कफीको धक्कु लगाउँछ। साँच्चै, यसको खल्तीमा सय रुपियाँभएको भए अर्ग्यानिक कफी होइन, केमिकल ठर्रा पिउँथ्यो होला।शहरमा सल्किएको छ कफी कल्चर डढेलोजस्तै। इल्ली–बिल्ली, जाभा–लभाजा, हिमालयन विन्ज र ब्राजिलियन रोस्ट। एकथरि मानिसहरुपैया काँचको कपमा कालो झोल पिउँछन्। कालो झोलसँगै रंग–रस–बास्नाको पनि कुरा आउँछ। कफी शपमा झन्डै पुतलीजस्तै सजिएका केटीहरू कफीको नाममा आइसक्रिम चपाइरहेका देखिन्छन्। कफी शपहरूमा वेलिज क्रिम पाइँदैन। त्यसैले आइरिश कफीको सम्भावना छैन। कफी–आइसक्रिम चपाइरहेका केटीहरू बीच–बीचमा चुरोटको धुवाँपनि उडाउँदैछन्। आइसक्रिम–कफी र चुरोटको यो कस्तो कम्बिनेशन! उनीहरूलाई कफीको स्वाद लिइरहेको त थाहै हुन्न होला। कत्रो बेथिति स्वादको। उसो त देश नै स्वादको मर्म नजान्नेले पिएको कफीजस्तै तीतो अनुभव भएको छ यसबेला। धेरैका लागि। थोरैका लागि त देश वैशाख–जेठको आइसक्रिम नै हो। यी धेरै र थोरैका बीचमा बाँकी बचेकाहरू साम्यवाद र पुँजीवादका सैद्धान्तिक र शास्त्रीय विवादमा वर्षौंदेखि अल्भि्कएका छन्। निरन्तरतामा क्रमभंगको नारा दिने राजनीतिज्ञहरू आ–आफ्नै बीचको सम्बन्ध चिस्याएर क्रमभंग गरिरहेका छन्। कुण्ठा सबैमा छ। केही सज्जनहरू पार्टी खोलेर क्रमभंग गर्ने व्यवसायमा लागेका छन्। पार्टी भनेको सम्पत्ति हो। चुनावमा एक दर्जनजति अन्य पार्टीका असन्तुष्ट र एक दर्जनजति भावुक र महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएर भोट टिपटाप गर्दा एउटा सीट त आइहाल्छ। चुनाव सजिलो छ। लगानी छैन। प्रतिफल असार–साउनकोे वर्षाजस्तै झरिरहेको हुन्छ। केही अल्पशिक्षित बेरोजगारहरू, आफैंलाई तमासा बनाएर बेचिरहेका केही लम्फूजस्ता लाग्ने केटाहरू र सांस्कृतिक कार्यक्रमको मन्चमा नाच्ने नाउँमा उफ्रिएर पैसा बटुलिरहेकाहरू– देशमा सबैको अनुभव मीठो छ। कफी कहिल्यै तीतो हुँदैन। त्यसको स्वादको मिठास लिन जान्नुमात्र पर्दछ।सहकारीवाट पंक्चर, पंक्चरवाट स्टेशनरी, स्टेशनरीभित्र भूमिगत चिया पसल। ऊ स्टेशन चलाएर बसेको छ। तै तै बुट–पालिससम्म पुगेको छैन। बुट–पालिस पनि त डेढसय रुपियाँजोर पुगिसकेको छ। तै पनि ट्याक्सीभन्दा महँगो भैसकेको छ भन्न त मिल्दै मिल्दैन। हरिभक्तको स्टेशन अगाडिबाट भर्खर चल्न थालेको एउटा हरियो बस बिस्तारै गुड्छ। उसले टेलिभिजनमा देखेको थियो, बसको पहिलो खेपमा हरिवंश कन्डक्टर बनेर पैसा उठाइरहेको थियो। हास्य कलाकारवाट विभिन्न ब्राण्डको प्रवर्द्धन व्यापारमा लागेका हरिवंश र मदनकृष्णले कति हजार बोरा सिमेन्ट, कति हजार टन फलामे छड बेचे होलान्? चल्छ, खूब चल्छ। उनीहरू एकपटक आएर उसको भूमिगत चिया पसलको स्टुलमा बसेर कफी पिइदिए उसको स्टेशनमा पनि मानिसको धुइरो लाग्थ्यो होला। भिक्षाटन गरेर ल्याएको सातुको घैंटो कटेरोको किलामा झुन्ड्याएर मीठो कल्पनामा डुब्ने कथाको नायक सोम शर्माजस्तै हरिभक्त कल्पनामा एकैछिन रमाउँछ। त्यसपछि स्कुलमा गुरुले सुनाएको गुरुवाणी स्मरण गर्दछ– पोखरीको सानो माछालाई ठूलो माछाले खाएजस्तै सानो पैसालाई ठूलो पैसाले तान्छ।मिक्स्ड भेजिटेबल– जिन्दगीलाई यसै भनिदिए हुन्छ। अलि ठूला रेस्टुराँमा मानिसहरूले खाइनसकेर प्लेटमा छाडेका खानेकुरालाई प्लास्टिकको ठूलो बाल्टीमा एकसाथ खन्याएको मिक्स्ड फूडजस्तै। भात, फ्राइड राइस, दाल, मटन फ्राइड, चिकेन तन्दुरी, करी, तरकारी र अचार– क्या स्वाद मानेर खान्छ सँुगुरले। सुँगुर रेस्टुराँको साइड बिजनेस हो। हरेक राति एघार बजेर बीस मिनट जाँदा धराने कालो सुँगुर फार्म खोलेर बसेको नकुल टाटा टिपर लिएर आइपुग्छ रेस्टुराँमा, साहुलाई मूल्य चुक्ता गर्दछ। मिक्स्ड फूडको बाल्टी टिपरमा लोड गर्दछ र अर्को रेस्टुराँतिर लाग्दछ।हरिभक्त चित्त बुझाउँछ– शहर पेशा हो। खै, के हो शहर... स्टेशनमा एउटा बूंगो आउँछ र भन्छ– एक कप चिया देऊ। पैसा भरे दिऊँला। हरिभक्त पहिलो वाक्य सुन्छ र खुशी हुन्छ। दोस्रो वाक्य सुनेपछि उसका नौ नाडी गल्दछन्। काला कौवाहरूको एक बथान सडकलाई छायाँमा पार्दै उडिरहेका छन्। उधारो चिया नदिने हरिभक्तको मूड बुझेपछि बूंगो पसलबाहिर निस्किन्छ– एक कप चिया पनि नपत्याउने कस्तो ज्यान भएछ यो! Tweet Leaveacomment Message *
'आशा मारेका छैनौं'पहाडी भूमिमा अक्सर नदीलाई पछ्याउँदै बाटाहरू बन्छन्। तिनै बाटामा मानिस नदीजस्तै बग्दै जीवन बाँच्ने उपायको खोजीमा निस्कन्छन्। जसरी नदी सधैं शान्त बग्दैन, मानिसका यात्राहरू पनि दुर्घटनाग्रस्त हुन्छन्। साहित्यमा पुनरावृत्त भूगोलकुनै लेखकको नाम लिनासाथ ऊ बसेको भूगोल र उसले लेख्ने निश्चित स्थान याद हुन्छ तपाइलाई? यसरी लेख्ने कति होलान्? हुन त अधिकांश लेखक आफू बाँचेको स्थान र परिवेशवारे नै लेखिरहेको...	गुफाभित्र देवतै देवताघुर्मिबाट हलेसी जाँदा जयरामघाटमा दुधकोशी नदी तर्नु पर्छ। घाट वारी ओखलढुँगा पर्छ भने पारी खोटाङ। नदीमा बेलिब्रिज छ जुन बर्खामा झिकिन्छ। घाटबाट ३२ किलोमिटरमा हलेसी महादेव। वर्सेनी हजारौं तिर्थालु हलेसी...	म सम्झूँ कसोरी?अस्ति भर्खर जुन गल्ती हुन गयो भन्ने बोधले झिल्सिँदै छु, अर्कोपटक पनि त्यस्तै गल्ती गर्छु कि भन्ने भय छ। दोस्रोपटक पनि त्यही गल्ती भयो भने म झिल्सिने मात्र होइन, पूरै...	धर्मसँग राजनीतिको फेरोभारतमा हालैको राजनीतिक परिवर्तनपछि नरेन्द्र मोदीको सत्तारोहणयता 'के भारत हिन्दु साम्प्रदायिक शक्तिहरूबाट परिचालित होला त?' भन्ने त्रास त्यहाँको एउटा वर्गमा देखिन्छ। यता नेपालमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का केही नेताले...	बजेट मिति संविधानमै लेखौंबजेट राजनीतिक र आर्थिक घोषणापत्र अर्थात् कार्यक्रम हो। यसअर्थमा यसमा राजनीति हावी हुनु अस्वाभाविक होइन। अति राजनीतिकै कारण समयमा नीति–कार्यक्रम र बजेट नआउनु भने विडम्बना हो।	कुरा सुन्नु बुढाकोउखान भन्छ–कुरा सुन्नु बुढाको आगो ताप्नु मुढाको। समाजमा योगदान पुर्यााएका र अनुभवले खारिएका जेष्ठ नागरिकको जीवन आफैंमा ठूलो विश्वविद्यालय हो। पुस्तक निकाल्न तीनको कलम चल्छ भने राम्रो सम्पादक मात्रै खोजे...	दयावान् दयारामबिहीबार दिउँसो १२:१० बजे।आदर्श सौलः युवक उच्च मावि, बुङ्मति, ललितपुर।एक सुस्त बालक विद्यालय प्रांगणमा धसि्रँदै यताउता गरिरहेका छन्। मुखको कुनाबाट अविरल र्‍याल बगिरहेको छ, तर पुछ्न सक्दैनन् या जान्दैनन्। शारीरिक...	नागरिक शनिबार	कम्प्युटरको देवत्वकरणठमेलको पुराना पुस्तक बेच्ने पसलबाट ल्याएको एउटा चाङमा पातलो म्यागेजिन भेटियो। त्यो 'स्मरण' नामक कम्प्युटर विशेषांक...	खण्डहरमा कला पछ्याउँदैदोलखा, गैरीमुदीका छविलाल श्रेष्ठ गाउँमा आएका केही कलाकारसँग मिलेर केही फरक काम गर्दै थिए। गाउँमै उपलब्ध...	जिन्दगीको ओखतीपरदेशीले बाटो नाप्यो छाप छाडेर पाउकोकोइ छौ कि औषधी गर्ने जिन्दगीका घाउकोसुदूरपश्चिममा युगौदेखि सुनिँदै आएका कतिपय...	घरभित्रै क्रान्तिशितलहर परेर बाहिर मौसम साह्रै चिसिएको छ। 'मैले लगाउन मिल्ने कपडा र जुत्ता ल्याउन नभुल्नु है...	भर्खरै...